Mogadishu Journal » 2021 » August » 16
Shir labo geesood ah oo dowladaha Somalia iyo Masar uga furmay Qaahira (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdiga ku wehelinaya booqashada uu ku joogo dalka Masar ayaa kulan laba geesood ah la qaatay Ra’iisul Wasaaraha dalkaas iyo xubno ka tirsan Golahiisa Wasiirrada. Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda iyo...
(Sawirro) Al-Shabaab oo laga qabsaday saldhigii ugu weynaa ee ay ku lahaayeen Mudug
Ciidamadda Daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay Saldhiggii ugu weynaa ee Al-shabaab ay ku lahaayeen aagga deegaanka Shabeelow ee Koofurta Gobolka Mudug. Saraakiisha ciidamada ayaa xusay in Al-shabaab ay saldhigan ka soo...
Amar Taliban ku soo rogtay weriyeyaasha reer galbeedka oo dhaqan galay (Sawirro)
Weriyeyaasha reer galbeeka ee ku sugan magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa dhaqan geliyey amar ka soo baxay kooxda Taliban ee qabsatayt dalkaas. Amarkan oo si gaar ah u saameyneynay dumarka ayaa lagu faray iney qaataan Xijaabka Islaamka, ayna jirkooda asturaan. Weriyaha CNN...
Arrin argagax leh oo ka dhacday garoonka Kabul & Warbaahinta oo hadal heysa (Sawirro)
Dhacdooyin argagax leh ayaa laga soo sheegayaa garoonka diyaaradaha ee Kabul iyadoo kumanaan dad ah ay isku dayayaan inay dalka cararaan kadib qabsashadii caasimada Afgaanistan ​​ee Taliban. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ugu yaraan saddex qof oo rayid ah ay ku dhinteen...
Rooble iyo wafdigiisa oo si aan caadi aheyn loogu soo dhoweeyey Qaahira (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda Masar halkaasoo si diiran loogu soo dhoweeyey. Waxaa garoonka dayuuradaha Qaahira si diirran ugu soo dhaweeyey Ra’iisul Wasaaraha...
Wararka Xanta Ah: Real Madrid ayaa ku dhow Kylian Mbappe, Barca ayaa isha ku heysa labada ciyaaryahan ee Arsenal
Miyuu mustaqbalka Kylian Mbappe ku dhow yahay xal? Mbappe ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, weeraryahanka Paris Saint-Germain ayaana ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo caasimadda Faransiiska. Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay...
Chaos at Kabul airport as Taliban retakes Afghanistan: Live News
At least five people are reported dead after panic rush of crowds at Kabul airport as Taliban seize power. The Taliban has declared the war in Afghanistan over after its fighters swept into the capital, Kabul, and President Ashraf Ghani fled the country. Victorious...
Wado Laami ah oo isku xirta jidka 30-ka iyo Laamiga Garawe oo xariga laga jaray (Sawirro)
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta xarigga ka jaray Wadada NECSOM oo isku xirta Jidka 30-ka iyo Laamiga weyn ee Garoowe ku xira magaalooyinka kale ee Puntland. Wadadan cusub ee laamiga ah ayaa kharashka ku baxay waxaa...
Madaxweyne Ashraf Qaani oo la baxsaday gaadiid lacago badan laga buuxiyay
Madaxweynihii dalka Afganistan Ashraf Qaani, ayaa ka baxsaday magaalada Kabul ee caasimada dalka Afgaanistan kadib markii kooxda hubeesan ee Daalibaan weerar kuoo qaadeen caasimada Kabul. Warar soo baxaya ayna baahinayaan warbaahinta caalamka qaarkood ayaa sheegaya in...
Ciidamada Mareykanka oo 5 qof ku dilay Garoonka Diyaaradaha Kabul (Daawo Sawirada)
Dhowr qof ayaa saakayto lagu dilay Garoonka Diyaaradaha ee caasimadda dalka Afganistan ee Kabul, kadib, markii ay Ciiddanka Maraykanka rasaas fureen. Ilo dhanka Amaanka ayaa sheegay inay Ciiddanka Maraykanka ee la wareegay Garoonkaasi ay rasaaseeyeen dad Reer Afgaan ah...